Tag: vague subject lines | Martech Zone
Tag: edoghị anya edoghi
11 Ogbenye Email Omume iji Zere Ọ gwụla ma less Chọrọ Ndị Ndenye Iwe
Fraịde, Ọgọstụ 26, 2016 Fraịde, Ọgọstụ 26, 2016 Douglas Karr
Digital Nke atọ Coast gbara ọrụ na Reachmail iji chọpụta omume kacha njọ na omume kacha njọ nke ndị ahịa email gosipụtara. Ihe omuma nke ha mere jikọtara omume obula na agwa ndi mmadu a na-echefu echefu iji nyere ndi ahia aka icheta ma jikọta omume dara ogbenye. Ha tinyekwara ndụmọdụ bara uru banyere ịgbanwe omume adịghị mma ka ọ bụrụ ezigbo omume. O di nwute, obughi onye obula nke na acho ihe oru ahia ahia jiri ya. O kwere omume na ị na-eme otu ma ọ bụ karịa